Ungazithatha njani izikrini ngaphandle kwamaqhosha asekhaya naMandla | IPhone iindaba
Ungazithatha njani izikrini ngaphandle kwamaqhosha asekhaya kunye naMandla
Iindaba ze-IPad | | iOS 7, iPad, Izifundo kunye neencwadana
Izixhobo zeApple zithambekele ekuphazanyisweni, izinto ezingasebenziyo njengoko kulindelwe kwaye kunjalo, amaqhosha ayasilela. Amaqhosha amabini uninzi lwabasebenzisi abanomdla ngamaqhosha asekhaya (ukuphuma kwi-Springboard) kunye neqhosha laMandla (ukutshixa nokucima i-iPad); kwaye kumaxesha amaninzi, ngamaqhosha okuqala okuphula / okungahambi kakuhle. Ewe, ukuba kukho naliphi kula maqhosha mabini aqhekezayo kwaye sifuna ukuthatha umfanekiso-skrini, asikwazi, kuba kufuneka siwacinezele ngaxeshanye. Kwi-Actualidad iPad siza kukunika isisombululo kule ngxaki, oko kukuthi, Siza kuba nakho ukuthatha iifoto-skrini nangona amanye ala maqhosha engalunganga.
Ukuthatha iifoto zesikrini ngesixhobo esifikelelekayo: i-AssistiveTouch
Kulungiselelwe abo bangaziyo ukufaka isikrini se-iPad yabo, kuya kufuneka ucofe amaqhosha ngaxeshanye Ikhaya namandla kude kuvele uhlobo lwefleshi kwiscreen esibonisa ukuba ukubanjwa kwenziwe kwaye ikwiRel yesixhobo sakho. Kodwa, Ungathini xa elinye lala maqhosha lingasebenzi ngokuchanekileyo? Nantsi ifayile amanyathelo ukuze ukwazi ukuthatha skrini kunye Isixhobo soFikelelo ku-iOS: Ukuncedwa.
Sifaka iisetingi ze-iOS kwaye sijonge i-tab «ngokubanzi«.
Emva koko, kuya kufuneka singene kwicandelwana elibizwa ngokuba: "Ufikeleleko" apho siza kubona zonke izixhobo ezinikezelwa nguApple ukuphucula ukufikeleleka kwi-iOS ezinje nge-zoom, i-VoiceOver, isicatshulwa esinesibindi, imisebenzi ekhawulezayo ... Siya kuba nomdla kwesinye sezixhobo ezisetyenziswa kakhulu: i-AssistiveTouch.
Kanye ekupheleni kwemenyu ye "Ukufikeleleka" siya kufumana isixhobo esisifunayo: Ukuncedwa. Ukuqala ukusebenzisa isixhobo kufuneka sisebenzise iqhosha phezulu.
Xa siyenzile, iqhosha liza kuvela kwindawo ethile yesikrini (emacaleni) apho sicinezela uthotho lwezenzo eziza kuvela. Cofa kwiqhosha uze ukhethe "iiDispos."; kwaye emva kwethegi "Ngakumbi".
Nje ukuba sikwindawo ehambelana nayo, siya kuba neqhosha elithi «Screenshot». Xa sicinezela kwiqhosha, i-flash iya kuvela kwaye ibonise ukuba kwenziwe ukubanjwa. Ke ngoko, kuya kufuneka sisebenzise i-AssistiveTouch (iqhosha limi ndawonye kwaye linokufumaneka naphi na kwi-iOS) kwindawo esifuna ukuyibamba.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ukulungisa i-iPad ngokwakho (I): Iqhosha lasekhaya
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 7 » Ungazithatha njani izikrini ngaphandle kwamaqhosha asekhaya kunye naMandla
ewe !! Ndiyabulela kakhulu
Ifowuni yam ibhlokiwe, ngoku iyakhala nje kodwa andikwazi ukuyiphendula, iscreen simnyama
geniaaaal… enkosi kakhulu!
Ndizithatha njani ii-skrini ukuba iqhosha eliphambili lesixhobo liye laphuka?
iziyolo zesondlo sitsho
UKUSEBENZISWA KAKHULU, IPHEPHA KUPHELA APHO NDIFUMANA INFO OFANELEYO, ENKOSI KAKHULU!
Ukuphendula kulonwabo lwesondlo
Enkosi!!! oku kukuba ndifuna !!!!
Ekugqibeleni !!! Umntu oyiqondileyo eyona ngxaki ñ Enkosi. Isebenziseka kakhulu. Ngaba yile nto bendiyifuna
Enkosi kakhulu, ibiluncedo kakhulu !!
Eyona ndawo iphambili yokugcina iCydia
Uyidlala njani izihloko zeNintendo kwi-iPhone Safari ngaphandle kweJailbreak